कोरोनाको महामारी बीच राष्ट्रपतिको रात्रिभोज
On: २०७७ असार १० गते, बुधबार, ०१:२५ बजे प्रकाशित
त्यसो त यही रात्रि भोजको कुरा उठायो भने पनि सरकारका अन्धभक्तलाई मन पर्दैन। जो राष्ट्रपतिको हरेक कदमलाई ”हो मा हो” भन्दै खुबै प्रशंसा गर्छन्। तिनलाई करोडौँको कार्पेट फेरेको कुराले शीतलता दिएपनि धेरैलाई छटपटाहट बनाएको हुनुपर्छ। त्यसो त राष्ट्रपति कार्यालयमा फेरिएको कार्पेटको विषयमा धेरैले अनेक तर्कले जित्न खोजे।
खयर जे जस्तो भएपनि सुकुल फेर्ने सामान्य हैसियत नभएका जनताले न करोडौँको कार्पेट फेरिएको खवर रुचाएका होलान् न एक छाक खान नपाएर भोकसँग पौँठेजोरी खेलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदै गरेको रात्रि भोजको खवर।
यो खवरले धेरैको प्रेसर हाई हुन पनि सक्ला।
जे जस्तो भएपनि बुधबार साँझदेखि नै राष्ट्रपति कार्यालयको माहोल बेग्लै हुनेछ। हिजो चप्पल लगाउन र आङ ढाक्न ठूलै सास्ती मोल्नु पर्नेहरू शक्ति र सत्ताको आडमा महँगो टाइसुट र अत्तर छर्केर बास्नादार हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय छिर्ने छन् र आफू मुलुकको उपल्ला दर्जाका व्यक्ति भएकै नातामा रात्रि भोजमा सरिक भएर मातिने छन् र अघाउने छन्।
कार्पेट काण्डले तातेको हाम्रो शीतल निवास फेरि रात्रि भोजले तात्ने छ। सञ्चारमाध्यममा खुराक बन्छ। भोलिका ब्रोड सिट दैनिकमा भोजको बारेमा ठूलै फन्टका शीर्षक छापिनेछ। अनि लक डाउनको अवधीमा कुन नेता कति मोटाए भनेर हेर्न पाइने ठूलै सौभाग्य पनि छ है।
नेताको पछिल्लो अवस्था पत्रिकाको सहज पहुँच भएकाले त हेर्लान् नी हामी विचराले कसरी हेर्नु भन्नु भाको?
“त्यसो भए पहिला जस्तो सडक नै ढाकेर पत्रिका बेच्नेहरू नभएपनि केही ठाममा बेच्न राखिएका हुन्छन् ति हेर्नु न।”
भोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई बोलाएको खवर छ है।
अन्य सम्बन्धित समाचार: विसं २०७८ मा तीन दशैँ
उहाँहरु त ठूला मान्छे बोलाएर के भो त रे? तपाईँलाई चाहिँ किन बोलाउने?
न तपाई यो देशमा ठूला-ठूला क्रान्ति गरेर जनताको वर्गीय खाडल पुर्छु भनेर युद्ध लड्नु भो, न तपाईंले नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भएर मुलुक र देशवासीको भाग्य र भविष्यको ठेक्का लिएर देशलाई बनाउने केही सहयोग नै गर्नुभो….
किन बोलाउने तपाईलाई हँ?
तपाँई त बानेश्वरमा लक्ष्मी दीदीको पसलमा खसीको मासु र चिउरा खाने हैसियतमा पनि हुनु हुन्न।
अनि किन बोलाउने तपाईलाई?
त्यहाँ त हिजो नाँगो खुट्टा शहर छिरेर प्राडो र पजेँरो परिवारका सदस्य पिच्छे भएका, घर घुम्दा पनि एक घण्टा लाग्ने, ठाडो परेर हेर्दा पनि टोपी झर्नेहरुलाई बोलाको भोजमा,
मलाई बोलाएनन भन्न तपाईले सुहाँउछ?
बरु त्यति ठूला व्यक्तिहरु कस्ता होलान्? कस्ता गाडी चढ्लान्? लुगा कस्ता लाउलान्? भन्ने हेर्ने इच्छा छ भने शीतलनिवास वरिपरिको चिया पसलमा बसेर लुकेर हेनु्स्।
साँझ ५ बजे नेताहरुको गाडीको लाईन लाग्नेछ। ठूला-ठूला आवाजमा सुरक्षा साइरन बज्नेछन्।
भोज खान प्रधानमन्त्री केपी ओली बा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर काका, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना सहितलाई बोलाइएको छ। उनीहरु मात्र कहाँ हो र? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल काका, झलनाथ काका, माधवकुमार काका, बाबुराम काका, शेरबहादुर देउवा दाई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द ‘बा’ लाई पनि निम्ता गरिएको बुझिएको छ।
तर केही नेताहरू बोलाउदैमा जानै पर्छ र भनेर नआउन पनि सक्लान्? यत्रो कोरोनाको कहरमा को जाओस्?
अन्य सम्बन्धित समाचार: बालबालिकालाई यातना दिएको आरोपमा एक जना पक्राउ
भोज खान भनेर नजाने नेताहरू पनि हुनसक्छन् है।
त्यसो त मुलुकका उच्चपदस्थका व्यक्तिहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा भोज खाउन् कि मङ्गलग्रहमा नै गएर डिनर गरुन् तँलाई के को खसखस पनि भन्ने लाग्ला तपाईँलाई।
तर कुरो त्यसो हैन। मुलुक लक डाउनमा छ।
साराका सारा व्यवसाय धरापमा छन्। कतिले हुदाँखाँदाको रोजगारी गुमाए।
जनता एक छाँक खान दश चोटि सोच्न बाध्य भएको बेला रात्रि भोज नगरे कहिले गर्ने? अहिले नखाए कहिले खाने?
हुनेले मिठोमसिनो खाएकै छन् तर नहुनेले पनि खाएकै होलान्। तर भोजै त खाएका नहोलान्।
राष्ट्रको उपल्लो पदका व्यक्तिहरूले कोरोनाको यो कहरमा भोज गर्न पर्छ, धेरै विरोध गर्दिन्…..
भोजमा खाएको कुरो नमिठो हुन सक्छ। स्वाद हराउन सक्छ।
त्यसैले भोज मात्र किन त्यसपछि छमछम नाँचौ। दोहोरी खेलौं। अनि पो भोज खादाँको मोज हुन्छ त। देशका उपल्लो र शक्तिशाली व्यक्ति भएको छनक मिल्छ त।
देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई कोरोनाले छुने त कूरै भएन।
त्यसैले अंकमाल गर्नुस्, हग गनुर्स अनि चियर्स गर्नुस्।
………अन्त्यमा रात्रि भोज सफलताको शुभकामना।
२०७७ असार १० गते, बुधबार, ०१:२५ बजे प्रकाशित